Aung.Info | အတွေ့အကြုံ
This post has 1,024 views	with no comments	.
မင်းကလဲ မင်း၊ ငါကလဲ ငါ
ဤဝထ္ထုတိုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် တွေ့ခဲ့ပြီး၊ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သော မြန်မာပြည်က ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမ ကရင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် စာရေးသူရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို အဖြစ်မှန်အတိုင်း ပြန်လည် ရေးသား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူနှင့် ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမလေးတို့ ခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီးနောက် အတူတူ အားလပ်ရပ် ခရီးတစ်ခု ထွက်ကြရာမှ မထင်မှတ်သည့် ဆက်ဆံရေးသို့ ပြောင်းလဲသွားရသည့် အကြောင်းကို အဖြစ်မှန်အတိုင်း ရေးသား တင်ပြထားပါသည်။
Posted on 14/Nov/2016 16/Nov/2016 Categories ဝထ္ထု ဇာတ်လမ်းများTags ဝထ္ထုတို, အတွေ့အကြုံ
This post has 3,279 views	with9comments	.
ဒီအခါ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း အရင်းတစ်ယောက်ကို သွားသတိရမိ ခဲ့ပါတယ်။ သူက အဲဒီတုန်းမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည် အကြီးဆုံးလို့ ဆိုရမဲ့ တီးဝိုင်းမှာ ဒရမ် တီးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖွဲ့မှာဘဲ မိမိနဲ့ အတန်း မတူသော်လည်း တစ်ကျောင်းတည်းထွက် သူမှာလဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရော့ခ် နာမည်ကြီး အဆိုတော်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ မိမိလည်း မိမိရဲ့ အကြံအစဉ်ကို သူတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကောင် အထည် ဖော်ရင်ဖြင့် အောင်မြင်လိမ့်မယ် မျှော်လင့်ကာ သူတို့အား အဆက်အသွယ် ပြုခဲ့ပါတယ်။
Posted on 13/Sep/2013 12/Nov/2016 Categories စာ အတိုအစများTags အတွေ့အကြုံ
This post has 163 views	with no comments	.